Global Voices teny Malagasy » ‘Zanakavavin’ny Ala’, Fanadihadiana iray Momba ny Fampizakana Tena ireo Vehivavy Tanora Any Ambanivohitr’i Paragoay · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 17 Marsa 2017 5:09 GMT 1	 · Mpanoratra Gabriela García Calderón, Mary Aviles Nandika (fr) i Amadou Lamine Badji, miora
Sokajy: Amerika Latina, Paragoay, Fanabeazana, Mediam-bahoaka, Tanora, Teratany, Vehivavy sy Miralenta
Diavolana ao amin'ny tahirin-javaboarin'ny alan'i Mbaracayú. Sary tao amin'ny Flickr an'i Jose A. Huertas  (CC BY-NC-ND 2.0).
Faritra lavitra ao Paragoay no misy ny alan'i Mbaracayú , ahitàna dobo kely amin'ny faritra ambonin'ny renirano Jejuí sy ny tahirin-javaboarin'ny alan'i Mbaracayú. Ilay toerana, hozatry ny fifangaroan'ny zavamiaina, dia toerana masina ho an'ireo karazana vitsivitsy efa tandindonin-doza .
Fa ho an'ireo olona miaina eny amin'ny manodidina ny faritra, sarotra ny fiainana andavanandro. Ny fandehanana an-tsekoly, ohatra, dia tsy mora, tsy vitan'ny hoe tsy maintsy mamakivaky zavamaniry matevina mamefy ny làlana ireo ankizy rehefa ho any, fa koa noho ny zavamisy, tsy fahampian'ny fitaovana  handrantoana fahalalàna sy ireo fitsaratsaram-poana atao amin'n vehivavy eny anivon'ny fiarahamonina.
Tamin'ny 2008, ny Fikambanana Moises Bertoni, sampana miadidy ilay tahirin-javaboary, dia nametraka ny Foibem-Panabeazana tao Mbaracayú, hetsika  iray ikendrena ny hanomezana fanabeazana tsara kalitao ho an'ireo ankizivavy mipetraka ao anatiny sy manodidina ilay tahirin-javaboary. Manome maripahaizana teknika momba ny siansan'ny tontolo iainana izy io aorian'ny fianarana ambaratonga faharoa.
Ireny no nifantohan'ilay sarimihetsika tamin'ny 2015 “Zanakavavin'ny Ala ,” notontosain'i Samantha Grant avy any San Francisco, Kalifornia. Haseho mandritry ny Fetibe Isantaonan'ireo Sarimihetsika Fanadihadiana, andiany faha-10 hatao ao Sébastopol ny 23 hatramin'ny 27 Mars io fanadihadiana io.
Nitafatafan'i Mary Avilés tamin'i Samantha Grant, tale mpanatontosa, ny momba ilay sarimihetsika sy ny tanjony.
Global Voices (GV): inona no resahana ao anatin'ny “Zanakavavin'ny Ala ” ?
Samantha Grant (SG): Ny Zanakavavin'ny Ala dia milaza ny tantara mampitolagaga sy mampahery ao anatin'ny iray amin'ireo ala faran'izay lavitra indrindra nefa mbola misy eto an-tany amin'izao fotoana izao, ny an'ny vondronà ankizivavy iray mandranto fahaizana ao aminà sekoly ambony iray ianaran'izy ireo ny fiarovana ny ala izay efa tandindonin-doza, ary hanorina hoavy mendrika kokoa. Any anaty ala tsy mbola nisy nikitika ao amin'ny Tahirin-Javaboary ao Mbaracayú, ambanivoitr'i Paragoay, ity fandihadiana ny marina ity dia manome topimaso ankavitsiana ny tontolo izay andalam-panjavonana misy ireo ankizivavy saronkenatra lasa vehivavy tanora manana fahasahiana eo am-pitomboana, rehefa avy notefen'ny finamànana tsy nampino nisy tamin'izy ireo. Noraketina an-tsary nandritry ny dimy taona, narahanay ny fiainan'ireo ankizivavy, nianga avy any amn'ny tokantrano tsotra dia tsotra misy azy ireo any amin'ireo vohitra indizena ka hatrany amin'ny taona nanolorana azy ireo ny maripahaizany, mba hijerena tsara ny vokatry ny fiofanana mitondra fiovàna norantoviny, sy ny ho tohin'izany amin'ny fiainan'izy ireo any aoriana.
GV: Inona no hafatra goavana ampitain'ny “Zanakavavin'ny Ala” ?
SG: Ny hafatra fototra ao anatin'ny sarimihetsika dia ny hoe raha omenao vintana ny ankizivavy amin'ny fanolorana azy ireo fanabeazana, dia afaka ny ho lasa mpikambana sarobidy sy mavitrika eo anatin'ny fiarahamonina, satria tsy toy ireo zatovo izay nahazo fanabeazana ka matetka miafara amin'ny fandehanana mitady harena any an-kafa, ireo vehivavy tanora dia tsy mandao ny vondrom-piarahamonina nipoirany. Sady koa, raha asianao tsindrimpeo ao anatin'ny fanabeazana atolotra ho an'ireo ankizivavy ny momba ny tontolo iainana sy ny lanjan'ny fiarovana ny ala tranainy, hanolotra sosokevitra mahasoa izy ireo ary mitondra hevitra vaovao amin'ny fomba hiadiana amin'ny fandripahana ny ala — olana iray izay tsy an'ny eo an-toerana irery ihany. Ny fandripahana ala tsy mitsahatra, mihazakazaka sy mandravarava ao Amerika Atsimo ataon'ireo mpitrandraka toeram-pambolena vaventy iraisampirenena, dia olana iray tokony hampiasa loha izao tontolo izao.
GV: Inona no nanosika anao hanapaka hevitra hamokatra io fanadihadiana io ?
SG: Tany ampiandohana dia nantsoina aho handray anjara tamin'io tetikasa io ho toy ny mpandrakitra an-tsary noho izaho mbola tanora no sady vehivavy, miteny tsy miambakavaka ny espaniola, ary ireo masontsivana ireo no kely indrindra nilaina mba hahafahana mifandray amin'io vondrom-piarahamonin'ireo vehivavy tanora miteny espaniola io. Ilay mpanatontosa ny sarimihetsika, nahita io tantara io rehefa nanoratra ny mombamomba an'i Martin Burt (mpanorina ny sekoly) no nifanena tamiko tamin'ny alàlan'ny tambajotrany misy ireo olom-pantany ary taorian'ny resaka fohy tamin'ny telefaona dia nisoratra anarana aho hamita iraka iray izay noeritreretiko ho somary fohy ihany fa nahavariana. Avy eo aho nihaona tamin'ireo ankizivavy, izay ny hany azo lazaina dia mahafinaritra. Taorian'ny andro vitsy nanaovana fandraketana an.tsary, nazava fa tsy ny hijanona fotsiny amin'ny toeran'ny mpandrakitra sary no toerana tokony hisy ahy, ary noho io zavamisy io, dia nifampiresaka izahay sy ilay mpanatontosa ka dia notapahana ny hevitra fa hitàna toerana manandanja kokoa aho. Nanaraka ireo ankizivavy izahay nandritry ny taona maro ary nivoatra ihany koa ny toerako ka lasa mpanatontosa. Saropady ny miresaka tetikasa izay olona hafa no nanomboka azy, ary tetikasa iray tsy mora io, nefa nanapaka hevitra aho ny hirotsaka aminà anjara asa manandanja kokoa, amin'ny maha-mpanatontosa, satria mino ilay tetikasa aho ary mino ireo ankizivavy ihany koa. Sady koa, amin'ny maha-mpamokatra ilay fanadihadiana, tsy voatery hanam-bintana foana ianao hitantara tantara tsara sy manainga fanahy, araka izany dia tonga dia niantsapazako io vintana io.
GV: inona no nanaitra indrindra anao tao anatin'ny tantaran'izy ireo?
SG: Ny zavamisy hoe tena mitovy marina mihitsy amin'ireo tovovavy avy eto Etazonia ireny ankizivavy ireny. Na eo aza ny hoe nitombo tao anaty fotoana tena samihafa amin'izay nisy ny ankabeazan'ireo anikizivavy eto Etazonia, ireny ankizivavy ireny dia mitovy fotsiny ihany amin'ireo hafa rehetra mety hifanena aminao eto Etazonia. Manana fanantenana, nofy , tahotra ary faniriana mitovy. Mametaka sarin'ireo olona mahafatifaty ny tanora eny akaikin'ny fandriany. Tia mandihy sy mihaino mozika pop. Mitsikanikany sy mifosa eo ampijerena fahitalavitra. Tia misehoseho amin'ny fitafiana, mihosotra makiazy ary amin'izao fananan-dry zareo aterineto izao, mankafy mitazona ny fifandraisany amin'ireo namany ao amin'ny Facebook.
GV: Nisy olana nosedrainareo ve teo am-panatontosàna ny fanadihadiana ?
SG: Fanamby sarotra ny dingana nanatontosàna io horonantsary io — saingy averiko indray fa samy manana ny fanamby azy manokana ny fanadihadiana tsirairay. Izany no tiako amin'ity asa ity — tsy mankaleo velively ary tsy maintsy tonga aminà famahàna olona hatrany aho izay tsy azoko an-tsaina mihitsy tany am-panombohana. Toy ilay hoe eny am-panaovana fandraketana sary izahay no nisy rivodoza goavana namely ny faritra ka nahatondraka rano ny arabe rehetra. Dia nialoka nihidy tao anaty trano bongo iray izahay ary nampiasaiko ny lamba tsy lena teny amiko mba hiarovana ny fakantsariko. Iny alina iny, afaka nivoaka ihany izahay nony farany, saingy nisy ora maromaro niherevan'ny tarika mba hatoriana nifanety teo amin'ny tany mando sy maloto tao amin'ilay trano bongon'io fianakaviana io, mandra-pahavitan'ny fanamboarana ny làlana. Naleonay fotsiny nankafy nijery ny orana sy nifampiankinankina tamin'izay teo akaiky teo–isan'ireny ny kisoa sy ny akohon'ilay fianakaviana izay niditra tao vokatry ny tafiotra. N hafanàna be, ny toetrandro tsy nampoizina, ny tsy fisian'ny fotodrafitrasa ary ny fahatapatapahan'ny herinaratra, izany rehetra izany nitambatra no nandrafitra io famokarana io ho kisendrasendra nahafinaritra, saingy ireny fahasarotana nosedrainay nandritry ny famokarana azy ireny dia voaonitry ny endrika majika madiorano nananan'ilay toerana. Ary ny fanehoana io toerana mahafinaritra io, toerana iray izay tsy ny rehetra no hanana vintana hitsidika azy eo amin'ny androm-piainany, dia isan'ny antony iray amin'ny fisian'ilay horonantsary.
GV: Hafiriana no laninareo namokarana ilay fanadihadiana ?
SG: Taona fito teo ho eo. Natombokay tamin'ny fakàna sary ireo ankizivavy tany amin'ny vohitra niaviany talohan'ny nandehanany tany an-tsekoly, avy eo dia nanaraka azy ireo nandritry telo taona naha-mpianatra azy izahay, ary nitohy tamin'ny fiverenanay nijery azy ireo taorian'ny nahazoany ny maripahaizana mba hijerena ny vokatry ny fiofanana teo amin'izy ireo amin'ny ankapobeny. Ny taona roa farany dia nampiasaina tamin'ny fanangonana vola, fandrafetana sy fanapariahana. Faly aho milaza hoe efa nozaraina nanerana ny firenena tao amin'ny PBS [fampielezampeom-bahoaka amerikana] ilay horonantsary. Ary tafiditra ho isan'ny “Women of the World initiative”, “Fandraisana Andraikitr'ireo Vehivavy eto an-Tany”, tohanan'ny Fondation Ford sy ny USAID [masoivohom-panjakana amerikàna] izay midika fa tsy ho firenena 12 ihany no handefasana ilay horonantsary, fa koa any amin'ireo faritra misy vondrom-piarahamonina ambanivohitra, amin'ny alàlan'ny fàfan'ireo telefaona finday, any amin'ireo toerana fantatra ho “firenen'ny fiovàna ara-tsosialy” vonona ny hanaiky fiovàna eo amin'ny anjara toerana raisin'ny vehivavy sy ny ankizivavy ao anatin'ny fiarahamonina misy azy ireo. Ny fanantenana dia hoe ity fitantaràna ity mba ho afaka hanampy ireny olona ireny hahatakatra fa afaka mitàna anjara toeran'ny mpisava làlana ihany koa ny ankizivavy rehefa omena fiofanana ary omena vintana hanao zavatra.
GV: Aiza avy no mety ho hita ilay fanadihadiana?
SG: Mihodina amin'ny alàlan'ny fitetezana ireo fetibe ilay fanadihadiana ary amin'izao fotoana izao, ho atombokay ireo andianà fandefasana azy ho an'ny daholobe izay hitondràna ny horonantsary ho any amin'ireo foibenà Toeram-ponenan'ny mpianatra amin'ny lisea sy ireo vondrom-piarahamonina manerana an'i Etazonia. Raha maniry ny hikarakara fandefasana ho an'ny daholobe ianareo, dia iangaviana hifandray aminay amin'ity imailaka ity: info@gushproductions.com.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/03/17/96634/
 Jose A. Huertas: https://www.flickr.com/photos/torontodesdeunaburbuja/8046108529/
 karazana vitsivitsy efa tandindonin-doza: http://www.mbertoni.org.py/v1/en/mbaracayu/reserva-natural-mbaracayu/biodiversidad-existente/
 tsy fahampian'ny fitaovana: http://www.mbertoni.org.py/v1/del-bosque-mbaracayu-al-mundo-graduadas-del-cem-disertaron-en-gramo/
 Zanakavavin'ny Ala: http://sebastopolfilmfestival.org/films/daughters-of-the-forest-hijas-del-bosque/